Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo qaabilay Madaxa barnaamijka Horumarinta degmooyinka ee JPLG(Sawiro).
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo qaabilay Madaxa barnaamijka Horumarinta degmooyinka ee JPLG(Sawiro). Posted by By Dalweyn Media at 24 June, at 14 : 18 PM Print Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna sii hayaha xilka madaxweynaha Gen. Cabdisamad Cali Shire ayaa ku qaabiley xarunta madaxtoyada Garowe madaxa barnaamijka Qaramada Midoobey ee horumarinta degmooyinka JPLG Mr. Patrick Duong.
Joint Program Local Government ‘JPLG’ayaa waxa uu ka shaqeeyaa 7 degmo oo Puntland waxana ku bahoobey shan hayadood oo Qaramada Midoobey ka tirsan waxana ka sokow horumarinta degmooyinka qayb ka ah xukun baahinta ,dimoqraadiyeynta iyo weliba maamula wanaaga.
Kulanka dhexmarey labada dhinac ayaa waxa goob jooga ka ahaa saraakiil ka tirsan madaxtoayda halka dhinaca kale fadhiyeen Anka Kitunzi madaxda farsamada barnaamijka JPLG,Maxamed Ali Nuur agaasimaha qorshaynta ee wasarada arimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo weliba Faridah Kariimi iyo Nasro Islaan oo iyaguna ka tirsan hawlwadeenada JPLG.
Habsami u socodka barnaamijka horumarinta degmooyinka Bosaso ,Qardho ,Garowe ,Galkacayo ,Eyl ,Bander Beyla iyo Jariiban oo ka socda magaalooyinkaasi ayaa laga wada hadley iyo weliba baahida loo qabo inay laga war qabo hawlaha ay ka fulinayaan hayadahan deegaanada Puntland.
‘’Qaabka ay shaqadu u socoto ayaa laga wadahadlay waxana uu ahaa kulankani mid labada dhinaci isku weydaarsadeen afkaar kala gedisan ugu danbeyntiina fahan guud oo mideysan ay ka qaateen’’ ayaa waxa yiri Afhayeenka madaxtoyada Puntland Axmed Cumar Xirsi kadib kulankaasi.
Halkan ka daawo sawiradda kulanka dhexmarey Puntland iyo madaxda JPLG